शब्दकोश: हिमचुचुरामा छैन मैले टेकेको …
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, March 13, 2011
वेदनाथ पुलामी March 13, 2011
जीवन जी तपाइँ लाइ र मलाइ उस्तै कुराको न्यास्रो लाग्या रहेछ !
मुन्छे ले यहाँ मरुभूमिमा त हिउ सँग खेली सके आबु हामि भने नेपालमा , त्यो पनि सगरमाथाको देशका नागरीक् , कत्रो गर्वका साथ भन्न सक्छौ तर एक पटक नि ...हिउ सँग जम्काभेट गर्ने मौका जुराउन सक्या होइन !
तस्विर निकै सुन्दार छन् !
Vishnu Pyakurel March 13, 2011
धाइबा जी, यस पटक छोटो तर निकै मनपर्यो । गोरखा दरबारसम्म त म पनि पुगेकै थिएँ तर यो अवलोकन गर्ने अवसर उसबेला जुरेन । काम विशेष फेरि समयाभाव भनूँ । तर तपाईंको यो पोष्टले फेरि मलाई त्यहीँ पुर्याएरै छाड्यो ।
पोष्ट र फोटो दुबैका लागि तपाईंलाई हार्दिक धन्यवाद ।
Dilip Acharya March 14, 2011
सानैमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको "के नेपाल सानो छ?" पढ्दा त्यो केवल भावनात्मक वा प्रतीकात्मक मात्रै भएको जस्तो लागेको थियो । तर पछिल्लो समयमा आफैं पनि देशका कुनाकानीमा पुग्न थालेपछि मलाई त्यो प्रतिक हैन वास्तविक लाग्न थालेको छ । माथिका दुई तस्विर मात्रै पनि हाम्रो विशालता झल्काउन काफी छन् ।
हिउँ बेला-बेलामा छोए पनि हिमाल छुने धोको भने मेरो पनि पुगेको छैन् ,ल यहीबाट भए पनि हेरेँ :) दामी !!!
Chaitanya March 15, 2011
राम्रा राम्रा तस्वीरको लागि धन्यबाद !